Azo iainana Tsara Ve Any Amin’ireo Tanan-dehibe Afrikana ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Aogositra 2012 9:26 GMT
Vakio amin'ny teny English, polski, Deutsch, Español, srpski, русский, Français
Fanadihadiana iray nataon'ny The Economist Intelligence [en] momba ireo tanàn-dehibe eran'izao tontolo izao azo iainana tsara (ny tatitra manontolo amin'ny endriny pdf) , no manolotra hoe amin'ireo tanàna 10 sarotra iainana indrindra eto ambonin'ny tany, 6 no aty Afrika. Kanefa, misy fandaharana iray hafa nataon'ny New Economics Foundation mampiseho fa araka ny tondro HPI ( Happy Planet Index ), sambatsambatra kokoa any amin'ny firenena afrikana sasantsasany noho ny any amin'ny firenena eoropeana maro. Raha izany, aiza ho aiza isika amin'ny famaritana ny kalitaon'ny fomba fiainana an-tanan-dehibe aty Afrika?
Eny an-dohasaha ny hasambarana
Araka ny fanamarihan'i Sabine Cessou, ny Happy Planet Index dia somary mitongilana amin'ny resaka fananan-tany ary tahaka ny manome tombony ireo firenena afrikana manaja ny tontolo iainana. Manamarika toy izao izy :
Ny momba an'i Madagasikara no maneho tsara ny mampiavaka ny fomba fandrefesana HPI. Io firenena io, latsaka anaty krizy politika sy sosialy efa hatramin'ny 2009, dia mikorisa misimisy kokoa isanandro mankany anaty fahantràna. Mahakasika 76% amin'ny mponina izany, raha 68% tamin'ny 2010, araka ny tatitra Perspectives économiques de l’Afrique an'ny OCDE [..] Saingy ny fanajàna ny tontolo iainana sy ny fomba fijery miabo ananan'ny vahoakany dia manome tombony ho an'io Nosy lehibe io. Miaraka aminà tahanà entona Karbona tsy misy afa-tsy 1,2, mitàna laharana ambonimbony ihany i Madagasikara ao anatin'ny fandaharan'ny HPI, eo anelanelan'i Frantsa sy Aotrisy.
Kanefa, io tahanà entona karbona 1,2 monja ho an'i Madagasikara io dia hafa ho an'Antananarivo renivohitra, izay matetika no voasokajy ho isan'ireo tanàna faran'izay maloto indrindra eto an-tany :
..Eo amin'ny toerana faharoa no misy an'i Dacca, renivohitr'i Bangladesh, izay miavaka amin'ny fisian'ny firaka mandoto ny rivotra. Ny tanàna roa manaraka dia i Antananarivo sy Port-au-Prince, izay renivohitr'i Madagasikara iry voalohany ary an'i Haiti ilay faharoa, “miatrika fihazakazahan'ny fitombon'ny mponina haingana be sy filàna ambony be koa amin'ny fitantanana ny fako sy ny rano”.
Lahatsary an'ny Banky Iraisam-pirenena ao Madagasikara momba ny fiahiana ara-tsosialy any amin'ireo tanàn-dehibe Malagasy.
Tahaka izany no zava-mifanohitra iainana isanandro ao Afrika; tanàn-dehibe ao anatin'ny firoboroboana tanteraka na eo aza ny tandra vadin-koditry ny fahantrana, voahodidin'ny hàbaka voajanahary miavosa izay mametraka ho eny anoloan'ny sehatra ny hany fifangarihan'ny fiainana ambanivohitra sy ny an-tanàn-dehibe.
Araka izany, ao Namibia, Antoine Galindo manoritsoritra ny toe-java-misy izay ho mora amin'ireo mponina marobe any amin'ireo renivohitra afrikana ny hamantatra azy :
Ny hanoherana ireny herisetra ireny indrindra no ampitandreman'ireo solotena vahiny samihafa. Ireny halatra ireny dia mety hifangaro daroka ara-batana any amin'ireo tanàn-dehibe. Ivelan'ireo tanàna be olona, mitoetra ho milamina ny firenena ary ankafizina noho ireo tontolo mahavariana sy maro loko ananany. Fa fotsiny, noho ny tsy fandriampahalemana izay manjaka hatrany eny amin'ireo arabe eny an-drenivohitra, mihisatra ny fizahantany, ary zara raha misy ny fahatongavan'ireo vahiny.
Ny tanànan'i Windhoek ao Namibie, avy amin'i Bries ao amin'ny Wikipédia. License CC-Attribution-Share Alike 2.5
Fitomboan'ny olana ara-poto-drafitrasa ho an'ireo tanàn-dehibe afrikana
Mandalina ny tatitry ny The Economist Intelligence i Amel Bouzidi. Momba an'i Alzeria, dia manamarika izy hoe :
Amin'ireo tanàna 140 nojerena akaiky, any amin'ny laharana faha-135 i Alger, aorian'i Abidjan (Côte d’Ivoire), Teheran (Iran), Douala (Kamerona) ary Tripoli (Libia). Dacca, renivohitr'i Bandgladesh, no manakatona ny laharana. Tsy atao mahagaga ny laharana ratsy misy ny renivohitra alzeriana, izay misy vahoaka maherin'ny 3 tapitrisa. Tsy manana toerana fialamboly i Alger, azo isaina amin'ny rantsan-tànana folo ireo efitrano fandefasana sarimihetsika, mahatsiravina ny fifamoivoizan'ny fiara ao ary mitaraina ny mponina amin'ny loton'ny sisin-dàlana. Amin'izao fotoana dia manampy ireo rehetra ireo ny fahatapatapahana matetiky ny herinaratra sy ny rano fisotro.
Ao Douala, soritry ny zava-misy ara-toekarena mahatsiravina ireo fahatapatapahan'ny herinaratra. Manoritsoritra ny zava-misy izay tsy aharahan'ny foto-drafitrasa misy ao amin'ny firenena ny fitomboana betsaky ny mponina i Julie Owono :
Araka ny tombantombana sasany, 20% monja amin'ny mponina ao Kamerona no afaka mahazo famatsiana herinaratra ara-dalàna. Mikasika izay, ireo izay afaka manana herinaratra dia manomboka mahita fahatapatapahana isaky ny telo andro. Lafo dia lafo ihany koa ny herinaratra ho an'ny ankamaroan'ny olom-pirenena. Ny AES Sonel, mpamatsy tsy mainkina, ohatra, dia nanambàra tsy ela akory izay, fisondrotam-bidy 7% nanomboka ny 01 Jona 2012.
Fivoarana nalaky be tamin'ny kalitaon'ny fiainana an-tanàn-dehibe
Ny fanadihadiana mikasika ny kalitaon'ny fiainana an-tanàn-dehibe dia nampiseho koa fa mety hiova malaky be ilay fandaharana. Singa iray tafiditra amin'ny fanomezana laharana, ny tanjaka ara-toekaren'ilay tanàna, tanàn-dehibe Shinoa telo no mibahana ny loha-laharana. Ilay tatitra dia manazava fa manana ny lanjany betsaka amin'ny fandanjàna ihany ireo fepetra hafa toy ny fahaiza-manaon'ireo andrim-panjakana, ny harena ara-olona, ny zava-mahasarika ara-kolontsaina ary ny fahamatorana ara-bolan'ireo tanàn-dehibe. Amin'ny vinan'ny hoavy, ilay tatitra dia manolotra fanatsaràna vitsivitsy izay tsy maintsy tratrarin'ireo tanàn-dehibe any amin'ireo firenena vao misonga (dia ireo tanàn-dehibe ao Afrika) mba hiakarany ao anatin'ilay filaharana [en]:
The rise of emerging markets will likely make a number of largely unknown cities rather more prominent by 2020. Bandung, Hangzhou, Lagos and Lima, for example, all feature growth rates of 6% or higher, but are familiar to few outside of their home countries today. That will change. A key question is the speed with which this will happen [..] To do so, they need to adapt their investment attraction policies, but this in turn requires more fundamental shifts. “They have a good stock of infrastructure, but it’s highly polluted and there are no public spaces and things like this. They now understand that they have to move to something more qualitative.”
Ny firoboroboan'ireo tsena vao mimpongatra dia hametraka eny alohan'ny sehatra, amin'ny taona 2020, tanàn-dehibe izay tsy mbola fantatra ny ankamaroany. Bandung, Hangzhou, Lagos sy Lima, ohatra, dia manana taham-pitomboana 6% na mihoatra, nefa mbola olona vitsy amin'ireo miaina ivelan'ireo firenena ireo no mahalala azy amin'izao fotoana. Hiova izany. Ny hafainganan'ny hahatongavan'izany no fanontaniana fototra [..] Ho fanatanterahana azy io, mila mampifanaraka ny politikam-pisarihana any aminy ireny firenena ireny mba hisarihana ireo mpampiasa vola, nefa izany dia tsy isalasalàna fa hitaky fanovàna goavana amin'ny tetikadin-dry zareo. «Matetika ireny tanàn-dehibe ireny no manana foto-drafitrasa tsara, saingy matetika koa ireny tanàn-dehibe ireny no tena maloto sady tsy misy toerana natao ho an'ny daholobe na kianja mitovitovy amin'izany. [Mba ho toerana mahasarika kokoa,] takatr'ireny tanàn-dehibe ireny ankehitriny fa tsy maintsy manolotra tohan-kevitra tsara kalitao kokoa ry zareo (ho fanampin'ny firoboroboany ara-toekarena).